Dhallinyarada aan shaqo iyo waxbarasho ku jirin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhallinyarada aan shaqo iyo waxbarasho ku jirin
La daabacay torsdag 13 juni 2013 kl 13.27
Dhallinyaro tiradoodu dhan tahay 112000 oo da’doodu u dhexeyso 16 ilaa 25 sano ayaan sannadkii 2011 shaqana haysan, waxbarashana ku jirin. Sidaasna waxaa lagu miijiyey warbixin qoraal oo ay hay’ado badani soo wadasaareen. Waxaa kaloo warbixintaas ka muuqata in qaybaha dalku ku kala duwan yihiin tirada dhallinyarada aan wax meherad ah ku jirn.
- Qof dhallinta yar oo sannad waxba qaban wuxuu khatar ugu sugan yahay in uu meherad-la’aan ku sii jiro. Mar walba uu sidaas ku sii jirana waa ay ku sii adkaaneysaa in uu dib ugu soo noqdo waxbarasho ama shaqo. Sidaasna waxaa yiri Inger Ashing oo wakiil u ururo qaabbilsan dhallinyarada.
Dhallinyaradani waxay sanooyin soo ahaayeen kuwo waxna baran, shaqana hayn. Qaarkood waxay u gooshi jireen waddamada deriska si ay shaqo uga helaan. Qaar badan ayaa waxbarashooyin ay ka mid yihiin af iwiidhishka ajnebiga loogu talagalay. Badankoodna wax dakhli ah ma aysan lahayn.
Warbixintaanna waxaa soo diyaariyey urur dhallinyarada caawina oo lagu magacaabo Dhallinyarada iyo shaqada oo kaashanayey hay’adda dhallinyarada, xafiiska shaqada iyo hay’adda dugsiyada.